Ururka Al-Shabaab oo ka hadlay Xiisada ka taagan degmada Beledxaawo | SAHAN ONLINE
Ururka Al-Shabaab oo ka hadlay Xiisada ka taagan degmada Beledxaawo
Shiikh Cali Maxamuud Raage(Cali Dheere)
MUQDISHO – Ururka Al-Shabaab ayaa ka hadlay xiisada ka taagan degmada Beledxaawo ee ka dhalatay derbiga ay Kenya ka dhiseyso,iyagoona baaq u diray bulshada ku dhaqan deegaankaas.
Afhayeenka Ururka Al-Shabaab Cali Maxamuud Raage(Cali Dheere) ayaa ka hadlay xiisada ,wuxuuna sheegay in aysan ahayn markii ugu horeysay ay Kenya dhul qabsato balse horey ay Kenya ugu soo duushay qeyb kamid ah dhulka Soomaaliya.
Waxa uu sheegay in falkan ay Kenya ka wado Beledxaawo ee dhul boobka ah uu yahay daan-daansi qaawan,isagoona ku eedeeyay maamulka Jubbaland in uu raali ka yahay xadgudubka ay Kenya wado.
Cali Dheere ayaa hadalkiisa ku daray in aysan marnaba Kenya u suurtagalayn in ay haysato dhul Soomaaliyeed.
…” Dowladda Kenya ma ahan markii ugu horeysay oo ay qabsato dhul Soomaaliyeed oo dad muslimiin ahna ay gumeysato, waxay ku soo duushay qeybo badan oo ka mid ah dhul Soomaaliyeed, waxaan u aragnaa dulmi iyo duulaan, marna ma aqbaleyno in Kenya ay ku soo xad gudubto dhul Soomaaliyeed, Mujaahidiintu waxay diyaar u yihiin in ay garab iyo gaashaan u noqdaan shacabka Beled Xaawo..”ayuu yiri Cali Dheere.
Afhayeenka Al-Shabaab ayaa ugu baaqay shacabka ku dhaqan Beledxaawo iney ka dhiidhiyaan falka ay Kenya dhulka ku boobayso,kuna burburiyeen guryo badan iyagoona godad laga dhisayo derbiga ka qoday gudaha degmada,taasoo shacabka Soomaaliyeed ka caraysiisay.